အချစ်ကြိုးသွယ်သော လက်ကလေးများ – Grab Love Story
အငယ်မလေးချိူမာလွင်က 8တန်းကျောင်းသူလေးပေါ.။သူတို.အိမ်ပြောင်းလာတာ–နှင်းမြူတွေဝေတဲ.ဆောင်းကာလလေးမှာပေါ.–ကျွှန်တော်ကလူပျိူပေါက်အရွှယ် သူတို.ကလဲဖွံဖြီုး-ထွားကြီုင်စအရွှယ်လေးတွေလေ။တင်မာလွင်ရဲ.ရင်သားကတော်တော်လေးကြီးတယ်–တင်ပါးကလဲကြီးပြီးကောက်တယ်–မျက်နှာလေးနဲ.သူအိုးတွေ–နို.အုံ.တွေကမလိုက်ဘူး—
မမသယ်ခိုင်းတဲ.အထုတ်လေးကို ချိူမာလွင်နဲ.အတူကျွှန်တော်မှပြီး အိပ်ပေါ်တက်လာတော.ချိူမာလွင်ခလုတ်တိုက်ပြီးကျမလို.ဖြစ်တော.
အဆက်လေးကြားကနေချောင်းကြည်.မိတယ်– 🙂 🙂 🙂 :)မမကညဝတ်အကျီင်္ကာဝန်ဝတ်ထားတယ်အပြာနုနုလေး–ကျွှန်တော်အိပ်ခန်းကပ်ရက်က–မမနဲ.သူညီမလေးတို.အိပ်ခန်းလေ–
ဘာလို.လဲဆိုတော.မမမခို.တရို.လေးနဲ.ဂါဝန်လေးဆွဲဆွဲအုပ်နေလို.လေ 🙂 🙂 🙂 🙂
ဒီလိုနဲ.-ဟတ်ပီးနယူးယားညလေးမှာပေါ.–မမက–“မောင်လေး လိုက်မှလား မမတို.နဲ.ဒီညဟတ်ပီးနယူးယားမယ်လေ လိုက်ခဲ.ပါလား”လို.ခေါ်လိုက်တော.
“ရော.–ဆိုင်ကယ်သော. မမအနောက်ကနေလိုက်မယ် မောင်လေးမောင်း”ဆိုပြီးသော.လှမ်းပေးတယ်လေ
မမသူငယ်ချင်းအိမ်ရောက်တော. လူတွေတော်တော်လေးဆုံနေပြီ အတွဲတွေလဲများတယ်
10မိနစ်လောက်ကြာတော.–Happy new Year –ဆိုတဲ.အသံတွေတမြို.လုံးဆူညံသွားတယ်–
အယုအယ အနမ်းလေးတွေဟာ ကျွှန်တော်.အတွက်တော.အကောင်းဆုံး သင်ရိုးညွန်းတွေပဲလေ–တဘက်ခါဆို ကျွှန်တော်တို.ကျောင်းတွေတက်ရတော.မယ်
အဆောင်ကိုမနက်ဖြန် သွားရတော.မယ် ပျော်စရာကျောင်းသားဘဝကိုရောက်တော.မယ် စောအလန်းလေးတွေနဲ.တွေ.ရတော.မယ် ငမ်းကြောထရတော.မယ်ဆိုတဲ.စိတ်ကူးတွေက
တညလုံးအိပ်မပျော်နိူင်ဘူးတချက်တချက် ကျွှန်တော်နမ်းရိူတ်ခဲ.တဲ.မမ-နူတ်ခမ်း–မမရင်သား-မမတင်ဆုံင်္ကြီး စတာတွေက်ုမြင်ယောင်နေမိတယ်လေ ဒီလိုဟိုဟာလေးမြင်လိုက်
ဒိါလေးမြင်လိုက်နဲ. ညတညကုန်ဆုံးသွားခဲ.ပြန်ပြီ—မတ်နေအောင်ထောင်နေတဲ.–ငယ်ပေါင်းလေးကတော.တညလုံးအိပ်ဘူးလို.ထင်တာပဲဗျာ ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ဒါဟာ–ချစ်ကြီုးသွယ်ဖို.စလိုက်တဲ.လက်လေးတွေကနေစတာဆိုပါတော.ဗျာ——— ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ဇာတ်လမ်းလေးရှာလိုက်တယ်လေ”နင်ကတကယ်ပဲသိချင်တာလား သိတော.ဘာလုပ်မှာလဲ”ပြန်ြေ့ပာလာတော.ကျွှန်တော်မှာ”ခင်ချင်လို.ပါ ခုလဲတယောက်နဲ.တယောက်သိသွားပြီလေ
တွေ.လိုက်ရပြီကျွှတ်တော်.အခန်းဖော်ပါသနာကြီးကအသားမည်းမည်းဝဝတုတ်တုတ်-ချွှေးပျံပြိးအသားအရောင်တွေလက်နေပါလား—“အခန်းဖော်အသစ်ထင်တယ် ကြိုဆိုပါတယ် လာသူငယ်ချင်း
နှစ်ယောက်ကသာမာန်လူနှစ်ယောက်ပေါ.–သူတို.နှစ်ယောက်မချီထားတာ–ပေါင်ရင်းနှစ်ဖက်လုံးကနေပျက်နေတဲ.–ခြေပျက်လူကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျာ–ရယ်ရခက်ငိုရခက် ;D ;D ;D
ဒီလိုနဲ.ကျွှန်တော်ပထမနျစ်ကျောင်းသားဘဝလေးမှာ–ချောင်းလိုက်–ဖူးစာအုပ်ဖတ်လိုက်–ဖူးကားကြည်.လိုက်–ဖာခန်းသွားလိုက်–နဲ.အဆင်ကိုပြေလို.ဘိုသိန်းကြီးဆီကပညာတွေရယူရင်းချစ်ရသောမေထံမှအဖြေလေးကျွှန်တော်ရခဲ.တယ်—“မေ–မောင်.ကိုချစ်တယ်”တယ်ဆိုတဲ.အဖြေလေးကျွှန်တော်ရခဲ.ြ့ပီလေ– ;D ;D ;D
ဒီနေ.တလပြည်.တဲ.နေ.လေးပေါ.ဗျာ–ချစ်သူသက်တမ်းတစ်လပြည်.တဲ.နေ.မှာ ကျွှန်တော်တို.ချစ်သူနှစ်ယောက် တောင်ချွှန်းကိုသွားလည်ပြီးချိန်းတွေ.ကျတာပေါ.ဗျာ
စကားပုံတောင်ရှိတယ်မှလား”လူသိကတင်ကြား–လူမသိတော.ချူံကြားတဲ.” 😀 😀 😀 😀 😀
မေကမျက်လုံးလေးမေးပြီး–ဟန်ချက်ညီစွာ–ပြန်လည်ဝေမျှတာပေါ.–အနမ်းတွေဝေဆာနေလို.–လက်ကလေးတွေကလဲ–စူဖြိူးနေတဲ.–ချစ်သူရင်သားနှစ်လုံးဆီသို.သိုင်းကွက်နင်းပြီးရေက်သွားတယ်–ဖူးဝေနေတဲ. နိူ.သီးလေးကိုလက်ကလေးနဲ.ချေပေးလိုက်တော.–မေမှာ–“အဟင်. အင်.”ဆိုပြီး
ဘိုသိန်း–အကြံပေးတီာတချက်တော.ညံသွားတယ်ဗျာ–အချစ်ကြီူးသွယ်သောလက်ကလေးတွေနဲ.–ပဲ–ချစ်ကြီုးတွေကိုသွယ်ခဲ.ရတဲ.–တလြ့ပည်.အထိမ်းအမှတ်လေးပြီးဆုံးသွားခဲ.ပါတယ်ဗျာ— ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
“မေ–ဘာလာလုပ်တာလဲ မှောင်နေပြီလေ-“လို.ပြောတော. “မောင်.ကိုအရမ်းလွမ်းလို. ပါမောင်–မောင်နဲ.မခွဲနီူင်လို.ပါ”ဆိုပြီး
“အင်. အင်.–အာအာ”ငြီးညူသံတွေ ကီးမှန်ထွက်ပေါ်လာတော.တယ်
“ဒေါက် ဒေါက် ဒါက်”တံခါးခေါက်သံကြားလို.
‘ဘိုသိန်း စိတ်ရူပ်တယ်ဗျာ လန်းမယ်.နေရာလေးမရှိဘူးလား သွားပြီးလန်းရအောင်ဗျာ
“ဘိုသိန်း ဘယ်သွားနေတာလဲဗျာ.–မောလာပြီ–လန်းခြင်ပါတယ်ဆို ခင်ဗျားနောက်လိုက်မှာဒီမှာဂွမ်းနေပြီဗျာ.
မင်းလန်းချင်လား မလန်းချင်ဘူးလား–ဒါပြဲေ့ပာ တခွန်းပြဲေ့ပာလိုက်
ဟဲဟဲ လန်းမှာပေါ.ချစ်ကိုကြီးရ–သွားသွားလိုက်မယ်နော် အားကိုးပါတယ်”
တခဏာကြာတော. ကျောက်ဆောင်တွေနားရောက်သွားတယ် ကျောက်ဆောင်တွေတဝိုက် ချူံတော်တော်ထူနေတယ် တောတွင်းစွန်.စားခန်းသဖွယ်ပေါ.ဗျာ-
ဘိုသိန်းတယောက်ရှာလဲရှာတပ်တယ်–ဒါကြောင်.စာမေးပွဲကျတာနေမှာ ;D ;D ;D ;D
နာရီဝက်လောက်ကြာတော.”မောင်တူး-မင်းရဲ.တောင်ဖက်ကိုကြည်.လိုက်ဆိုတော. အတွဲတတွဲတက်လာတယ်–ကျောင်းကပဲဗျာ. ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတယ်လေ–
ကောင်မလေးကပိန်ပိန်ပါးပါး-အသားညိုညို ကုလားစပ်ထင်တာပဲ–ထီးကလေးစောင်းလို. ချူံကွယ်နေရာလို.ထင်ပြီးသူတို.ထိုင်လိုက်သည်–ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်လေးက
ကောင်မလေးကမနေနီူင်လို.ထင်တယ် ကိုယ်တိုင်ဖြူတ်ပေးလိုက်သည်–ထို.နောက် လွယ်အိပ်လေးကိုခေါင်းခုလုပ်ပေးပြီးကောင်မလေးကိုလဲချကာ–အပေါ်ကအကျီင်္လေးကိုလန်ပြီ
ကောင်လေးကတော.အဖုတ်လေးနားမျက်နှာအပ်ပြီး–ခေါင်းကိုမွေလိုက် လျှာနဲ.လျှက်လိုက် အစိလေးတွစုပ်လိုက်နဲ.အလုပ်ကိုဖြစ်လို.
သူများတွဲတွေကတွဲဖက်နဲ.ချစ်ကြီုးလေးတွေသီသလို–ကျွှန်တော်ဘ်ာဒါကြီါ်ကလဲ–ချစ်ကြိုးလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်လက်နဲ.သီကာနေတော.သည်။ ;D ;D ;D ;D 😀 😀 😉 😉
လှည်းလုပ်စီးလို.ရတယ် ;D ;D ;D ;D ;D ;D
မေဘယ်သွားချင်လို.လဲ”မေးလိုက်တော. “မောင်အခုဘာလုပ်နေတာလဲ မေ.ဆီလာခဲ. ဒီရောက်မှပြောမယ်နော်မောင်
“အင် အင် လာခဲ.မယ်နော်—ခဏလေးစောင်.–မောင်ရေချိူးမျက်နှာသစ်ြ့ပီးလာခဲ.မယ်နော်”
ကျွှန်တော်လဲချွှေးတွေစိုချွှဲလို.အကောင်းဆုံးမဟုတ်တဲ.အကောင်းလေးကိုခံစားလိုက်တော.သည်။ 😛 😛 😛 😛 😛 ;D ;D ;D ;D
ထိုစဉ် အသံလေးတခုထွက်လာတော.သည်”သား တူးလေး–ဘာလုပ်နေတာလဲ”လှည်.ကြည်.လိုက်တော.–ကျွှန်တော်အန်တီလေးကိုတွေ.လိုက်တယ်–“အန်တီလေးဘာလုပ်တာလဲဒီကို
“မေ ဘယ်လိုလဲဖြေလို.ရလား အိုကေလား”
“မေ နေမကောင်းဘူး မောင်–ဟို–လေ
မိန်းကလေးရောဂါဖြစ်နေလို. ညနေမှဖုန်းဆက်လိုက်မယ်–ခုအဆောင်ပြန်မှရမှာမို.နော် မောင်”
ကျွှန်တော်ဘာပြေရမှန်းမသိဘူး အားနာစိတ်နဲ.အန်တီလေးမျက်နှာမကြည်.ရဲဘူးဖြစ်နေသည်.ထိုချိန်ကျွှန်တော်.ဘေး အန်တီလေးကလာထိုင်ပြီး–ကျွှန်တော.လက်လေးကိုင်ပြီး
“မတော်တဆဖြစ်တာပဲ သားကိုအပြစ်မပြောပါဘူးသားရဲ.ဟုတ်ပြီလား ဒီမှာကြည်.အန်တီလေးကို”
ဆိုပြီ –ကျွှန်တော်မျက်နှာလေးကိုဆွဲမော.ကာကြည်.စေသည်။အန်တီလေးညဝတ်ဂါဝန်အဖြူရောင်ဝတ်ထားသည်။အန်တီလေးမျက်နှာက ဖြူဝင်းပြီသန်.စင်ခောမွေ.နေသည်။
“သား-အစိလေးကိုလျှက်ပေး နာနာလေးဖိလျှက်ပါလားကွယ်နော်–အား အား-အိုးးကောင်းတယ်သား–လက်ကလေးနဲ.–အပေါက်ထဲထည်.ပေးနော်-အားအား–ကောင်းတယ်
“ဘုတ် ဘုတ် ဗြွတ်ဗြွတ်–အားအား–အဟင်.အုအိုအို–ကောင်းတယ် –အားလိုစမ်းပါ–နာနာလေးလိုး–သား–
အား အို.အို.အို. အဟင်.
ကျွန်တော.နဖူးပေါ်နွေးထွေးသွားစေသော အထိအတွေ.လေးတခု ဆင်းဆက်လာတာကိုခံစားလိုက်မိသည်။ကျွှန်တော်.မျက်စိကိုဖြည်းညင်းစွာဖွင်.လိုက်တော.–အန်တီလေးရဲ.လှပတဲ.မျက်နှာကိုအနီးကပ်တွေ.မြင်လိုက်ရသည်။အန်တီလေးရဲအနမ်းဆိုတာသိလိုက်ရပြီး–အပြုံးလေးနဲ.ရယ်ပြလိုက်ချိန်”ထတော.လေ သား–ညနေစောင်းနေပြီ-တော်ကြာဖျားလာမယ်နော်–ထထ–တော်တော်မောသွားတယ်ထင်တယ်-အဟင်.အဟင်.–လူကတာငယ်တာ–ရိုတ်ချက်ကတော.ကမ်းကုန်ပဲနော်–အဟင်.အဟင်.”ြေ့ပာပြီးသဘောကျနေတဲ.အန်တီလေးကိုကြည်.ပြီး–ကျွှန်တော်ပြုံးနေလိုက်သည်။
“အာ အာာအာ
“အာ-ဟာ ဟာ ဟာ အာအ
အာအာအာအာ အာအာအာ ကောင်းတယ်–ကောင်းတယ်–အအာအာအာအာအအာ
“ဟဟဟ ဘယ်သူဖလက်ပြတယ်တယ်ပြောလို.လဲအန်တီလေးရ အန်တီလေးသာဟဲဟဲ–မျော.ချင်နေတာမှလား သားသိတယ်နော်။
အား အားအားအားအာ
ညင်သာစွာထကာ–အပြင်ဝရံဒါသို.ထွက်ခဲ.လေသည်။လေပြည်အေးအေး တဝီးဝီးတိုက်နေသလို အေးမြသောလရောင်ရဲ.စိုပြေမူတွေက ကျွှန်တော်မေ.ကိုသတိပိုရသွားစေမိသည်။ဘာတွေများလုပ်နေမလဲ
“သားဘာလုပ်နေတာလဲ အပြင်မှာအေးတယ်လေ ထလာအထဲဝင်ဖျားလာမယ် ထထလာ”
အော်..ဒါပေါ.သားရယ်ချစ်သူပဲလွှမ်းမှာပေါ. မနက်ဖြန်သားသူဆီသွားတော.လေ ဘာလဲအန်တီလေးကိုအားနာနေတာ သွားမှာတာသွားလိုက်ပါ
ကျွှန်တော်သွားတာမသိစေချင်တာကြောင်. တိတ်တ်ိတ်လေးထကာရေမိုးချူိးလိုက်တော.သည်။အန်တီလေးအိပ်နေတာကြည်.ကိုဘေးကနေရပ်ကြည်.ကာ စိတ်ထဲကနေ နူတ်ဆက်လိုက်မိသည်။
ခွဲမသွားပါဘူးမေရယ်–မောင်ခဏသွားလည်နေတာပါနော် ခုမောင်ပြန်လာပြီလေမေ.ဆီကိုနော် ငိုနဲ.မေ–